Masar oo beenisay wararka sheegaya in Husni Mubakar xaaladiisa caafimaad liidato – SBC
Masar oo beenisay wararka sheegaya in Husni Mubakar xaaladiisa caafimaad liidato
Cairo:- Qareenka u doodaya madaxweynihii hore ee dalka Masar Xusni Mubaarak ayaa ka dhawaajyey in tan iyo bishii April ee la soo dhaafay in Mubaarak xaaladiisa caafimaad laga deerinayo .
Wakaaladda wararka ee sharqul awsat oo soo xiganaysa mas’uul katirsan dowladda ayaa sheegtay in Mubaarak xaaladiisa caafimaad ay aad u wanaagsan tahay balse ay jiraan hoos u dhac cadaadiska dhiiga markale.
Mas’uulka ayaa intaas ku daray in 83 jir uu marmar xaaladiisa caafimaad laga dareemayo degnaansho la’aan.
Warbaahinta kala ee dalka Masar ayaa sheegay in Mubaarak maxkamad la horkeeni doono horaanta bisha August ee soo socota.
Madaxweynihii hore ee Dalka Masar Maxamed Xusni Mubaarak oo tala dalkaasi hayey Waqti dheer ayaa isaga tegay hogaanka dalka masar kadib markii ay soo food saartay diidmo iyo kacdoon shacab oo aad u balaaran.
Mubaarak ayaa kacdoon xoogan oo biloowday 25kii bishii hore ee Janaayo uu aakhirkii keenay inuu xilka isaga dego isagoo si aad ahna u diiday inuu si sahal ah isaga tago balse Kacdoonka shacabka oo sii kordhayey ayaa ka guuleeystay kuna qasbay inuu isaga dhaqaajiyo Xukunkii uu horboodayay mudo ka badan 30 sano.